5 အကောင်းဆုံး Flame က Black ကျောက်
Flaming isaprocess which makes the surface of granite rusty. We use Unpolished slabs of granite for flamed using gas flames to burn the surface. A gas welding machine is used for burning the surface. The process of granite flaming looks like coloring the granite by high flame. LPG နှင့်အောက်ဆီဂျင်၏အရောအနှောမြင့်မားသောအပူနှင့်အတူမီးတောက် generate. နှစ်ဦးစလုံးဓာတ်ငွေ့များ၏ပေါင်းစပ်ကျောက်၏ခက်ခဲမျက်နှာပြင်ကိုထိုးဖောက်နှင့်မူလတန်းမျက်နှာပြင်ကိုမီးရှို့ဖြင့်သံချေးတက်စေသည်. မီးလျှံလည်းအလားတူ LPG ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့မြင့်မားသောမီးတောက်များနှင့်အတူတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါသို့မဟုတ် tile ကိုကိုမီးရှို့၏လျှောက်လွှာများနှင့်အောက်ဆီဂျင်အရောအနှောရှိသည်သောအော်တိုစက်အားဖြင့်ပြု.
မျက်နှာပြင်၏မီးလျှံပြီးနောက်, it becomes rusty and nonslippery. We do flaming using special machinery as well as traditional methods. နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများရလဒ်အလားတူဖြစ်ကြပြီးကျနော်တို့ကိုတောင်ကျောက်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြီးသွားရ.
အတော်များများကဗိသုကာနှင့်ဆောက်အသုံးပြုမှုကြီးမားသောစီမံကိန်းများကိုတစ် nonslippery နှင့်ကွဲပြားခြားနားပြီးအဘို့ကျောက် flamed. ဤသည်မှာပြီးအနက်ရောင်ကျောက်ပေါ်တွင်လှပသောကြည့်.
ပိုယူနီဖောင်းသည်နှင့်မီးလျှံပြီးအတွင်းလှပသောကြည့်ကတည်းက Flamed အနက်ရောင်ကျောက်လက်သမားတို့နှင့်ဗိသုကာအကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်. ကွဲပြားခြားနားသောအော်တိုနှင့်ရိုးရာစက်တွေသုံးပြီး flamed နိုင်သည့်များစွာသောအနက်ရောင်ကျောက်ရှိပါတယ်. ဤတွင်အကြှနျုပျတို့သညျကိုအကောင်းဆုံးပြသပါလိမ့်မယ်5Flamed အနက်ရောင်ကျောက်.
Rajasthan က Black
Flame ကို Rajasthan က Black Flame ပြီးအတွင်းကျောက်ထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးအရောင်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်အိန္ဒိယကနေအပေါငျးတို့သအနက်ရောင်ကျောက်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်. ဒီကျောက်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ Flame ပြီးထိုသို့စံပြအောင်. ဤသည်မှောင်မိုက်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်, အရာလျှံအလွန်ကောင်းသောကြာ. This isacheap granite and flaming on the surface of this material does not take extra efforts. You can simply burn this granite using basic machinery. It looks beautiful in flamed pavers, outdoor floors, and walls. We have done several projects of flamed Rajasthan Black Granite in Europe and Asia.
Black ကက Galaxy
Black Galaxy is alsoapopular choice for flamed black granite. This granite is the darkest granite available in India. Since it has silver and golden specks all over the surface, we can not judge the darkness on the polished surface. When the surface is burned it comes outavery dark and rusty material. You can use it in the interior as well as exterior application. thin lines on the galaxy hide in the process of flaming and you getahomogenous surface with small golden specks and dark color material.
The G20 black is alsoadark Indian Granite withasurface which takes good flaming. The sugar dots of this beautiful black granite hide during flaming the surface and it looks plain and dark after flaming. Flamed G20 Black Granite is less expensive than the absolute black granite and it can be used in big projects. There isalittle difference in the flamed absolute black and g20 black granite. You can use Flamed G20 in different uses such as wall decoration, အထိမ်းအမှတ, pavers etc.
Fish Black isanew granite from India, this granite is gaining popularity very fast. အဆိုပါဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာဤလှပသောကျောက်၏စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်ဟာ Rajasthan က Black ကျောက်ဆင်တူလျှံတတ်၏. ဤလှပသောအနက်ရောင်ကျောက်ပုံထဲမှာအဖြူအရောင်ငါးရှိပါတယ်, အဆိုပါလျှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးလှပသောကြည့်ရာ. သငျသညျမွို့ရိုးကိုအလှဆင်အတွက်ဤကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, အထိမ်းအမှတ, နှင့်အခြားအလှဆင်အသုံးပြုမှု.
သငျသညျစီမံကိန်းများနှင့်အခင်းလမ်းခင်းကြီးမားသောဧရိယာ၌မီးလျှံက Black ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဤရွေ့ကားမှောင်မိုက်ကျောက်ဆိုကျောက်ခဲနှင့်အစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြစ်ကြပြီးဤ ပတ်သက်. ထူးခြားသောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည်. You can use any of these black granite for large size and small personal projects. We also have different types of နှမျးဖတျကြောကျ available in flamed finishing. You can learn more about the process of flaming ဒီမှာ.
Facebook ကတွစ်တာLinkedIn တို့RedditGoogle+ ကTumblr သည်PinterestVKအီးမေးလ်ပို့ရန်
အောက်တိုဘာလ 12, 2018 | 1 မှတ်ချက်
စက်တင်ဘာလ 7, 2018 |0မှတ်ချက်များ
သြဂုတ်လ 27, 2018 |0မှတ်ချက်များ
ကျောက် Tile ကိုအသုံးပြုခြင်း
သြဂုတ်လ 22, 2018 |0မှတ်ချက်များ
ငါ့နာမကို Save, အီးမေးလ်က, ငါမှတ်ချက်ပေးရန်နောက်တစ်ကြိမ်အဘို့ဤဘရောက်ဇာထဲမှာက်ဘ်ဆိုက်.
ဇန်နဝါရီလ 8, 2018
ဇွန်လ 2nd, 2018
ဇွန်လ 8, 2018
ဒီဇင်ဘာလ 29, 2017
ဧပြီ 20, 2018
နိုဝင်ဘာလ 20, 2018
အောက်တိုဘာလ 12, 2018
စက်တင်ဘာလ 10, 2018
Rosso Levanto စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း
စက်တင်ဘာလ 9, 2018
ကိုလိုနီခေတ် White ကကျောက်
စက်တင်ဘာလ 8, 2018